Teren’ny Minisitry ny Fahasalamana ao Papua Nouvelle Guinée (PNG) Ireo Hopitalim-panjakana Mba Hitsahatra Tsy Hiresaka Ny Tsy Fahampian’ny Fanafody ao Amin’ny Firenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2017 15:30 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Türkçe, Español, English
Klinika Susa Mama, Hopitaliben'ny Port Moresby, PNG. Loharanao: Flickr. Sary nalain'i Ness Kerton ho an'ny AusAID. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Namoaka taratasy fifandraisana ny minisitry ny fahasalamana ao Papua Nouvelle Guinée, nanerena ireo mpiasa sy manampahefana amin'ny hopitalim-panjakana hampitsahatra ny firesahana amin'ny media momba ireo olana mifandraika amin'ny rafitry ny fitsaboana ao amin'ny firenena.
Vondrona samihafa marobe no niampanga ilay taratasy fifandraisana ho toy ny “baiko tampimbava” atao amin'ireo mpiasam-bahoaka izay niresaka be momba ny tsy fahampiana fanafody sy fitaovana any amin'ireo hopitaly. Saingy nitondra fanazavàna ilay minisitra hoe natao fotsiny hiarovana ny olona izy iny ary ireo mpiasan'ny fahasalamàna dia hanohy hisitraka hatrany ny fanànany zo haneho malalaka ny fomba fijerin'izy ireo.
Ny 15 Aogositra, nosoniavin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny HIV/AIDS Sir Puka Temu ny taratasy fifandraisana laharana 66/2017, izay nibaiko ireo mpiasan'ny fahasalamàna tsy hiditra amin'ny famoahana fanambaràna tsy ofisialy ho an'ny fampahalalam-baovao:
Voamarika fa tato ho ato dia nisy torohay momba ny olan'ny fahasalamàna tafavoaka any amin'ny media, nataon'ireo mpiasa sasantsasany ao anatin'ny sehatry ny fahasalamàna, izay nandiso sy niteraka tahotra ary fikorontanan-tsaina teny anivon'ny fiarahamonina, ary notaterina tsy araka ny tokony ho izy, tsy nisy fisaintsainana tsara sy porofo sahaza.
Mitaky aho ankehitriny ary mandidy mba tsy hisy olona na iza na iza mpiasan'ny fahalasamàna na tale mpanatanteraka na mpitantana sy vaomiera amin'ny sehatra rehetra ka hamoaka vaovao momba ny raharaha / olan'ny fahasalamàna, ho an'ireo fitaovana rehetra fanapariahana vaovao.
Ilay taratasy fifandraisana, izay nakarina ho ao amin'ny media sosialy ary vetivety dia niparitaka be, dia nanipika fa ny Biraon'ny Minisitera irery ihany no hany afaka mamoaka vaovao momba ny rafitry ny fahasalamàna.
Ilay vondrona mpiady amin'ny kolikoly, Transparency International , ao Papua Nouvelle Guinée, nilaza ilay taratasy fifandraisana ho “tampimbava ho an'ny mpiasam-bahoaka”. Nampiany hoe:
Manakenda ny resaka natao ho an'ny daholobe ity baiko ity, manitsakitsaka ireo soatoavina masina ao anatin'ny Laàm-panorenan'ny firenentsika, ary mamorona tontolo feno tahotra rehefa amin'ilay fotoana tena ilàna fifanakalozankevitra tsy miolankolaka.
Mila fiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamàna sy ireo mpiasam-bahoaka sivily hafa rehefa mba mitondra avo ny olan'ny firenena ry zareo.
Sam Yockopua, mptantsoratry ny Fikambanan'ireo Dokotera ao Papua Nouvelle Guinée dia niaro ny zon'ireo dokotera sy mpiasan'ny fahasalamàna ho afaka milaza ireo olana izay ilaina resahana imasom-bahoaka:
Tsy maintsy ataoko tena faran'izay mazava, fa raha toa tsy ampy fanafody izahay, dia hotohizanay ny tabataba, ny tsy fanajàna ny didy napetraky ny ministera. Tsy hanakana anay izany satria raha izy ireo (fanjakàna) no ho andrasanay, dia ho taona maro no lany ary ho faty ireo marary. Tsy hiandry azy ireo izahay. Hotohizanay ny tabataba. Hotohizanay ny fitenenana.
Araka ny tatitra dia noho ny tsy fisian'ny vola sy ny tsy fahaizana mitantana no niteraka ny tsy fahampian'ny fanafody any amin'ireo hopitalim-bahoaka.
Raha namaly ireo fanakianana, nanazava i Sir Puka hoe tian'ny biraony fotsiny ny “hampifanaraka ny hafatra alefa mba hisorohana ny tahotra sy ny fikorontanan-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra amin'ireo olana saropady toy ny tsy fahampian'ny fanafody sy fitaovana fitsaboana”:
Any anaty fikambanana tsirairay, fanjakana na tsy miankina, ny lehiben'ny fikambanana no mpitondra teny ara-dalàna amin'ny fomba ofisialy.
Nanisy tsindrimpeo ihany koa ny ministra hoe mampihatra “politika manokatra vaovavarana” izy, izay midika fa afaka miteny momba ireo fomba fanao ireo mpiasan'ny fahasalamàna ary misy ny rafitra natao hanangonana ireo tamberina avy any amin'ireo mpiasan'ny hopitaly sy ireo manampahefana.
Nampian'ny minisitra fa fikasan'ny governemanta vaovao ny hanamboatra fandaharanasam-pamatsiana haharitra taona roa mba hiatrehana ny tsy fahampian'ny fanafody any amin'ireo hopitalim-bahoaka.
Miakatra ny onja fanoherana ny fitrandrahana ny fanambanin'ny ranomasina lalina
Fiji 17 ora izay
Fiji 14 Mey 2022